Musi waGunyana 23, Apple inovhura yepamhepo Apple Chitoro muIndia | IPhone nhau
Pakupera kwaNyamavhuvhu, tinokuzivisai nezvekuvhurwa kuri kuuya kweApple Chitoro muIndia, Chitoro cheApple icho pakupedzisira ichavhura masuo ayo virtual, Musi wa23 Gunyana, inova kukura kukuru kweApple nekuti ichaita kuti huwandu hwayo hwezvigadzirwa huvepo kune vanopfuura mamirioni 1.200 vagari.
Apple ichapa huwandu hwakazara hwezvigadzirwa nemasevhisi zvakananga kubva kune yayo webhusaiti, kuve "yekutanga-chiyero chiitiko" sekudanwa kwayakaitwa Apple pachayo. Kuburikidza nechitoro, vashandisi vese vachakwanisa kugamuchira rubatsiro rwakazara nekutenda kune Apple nyanzvi mune zvese Chirungu neHindi (mitauro miviri iri pamutemo munyika).
Deirdre O'Brien, Chief Executive Officer weApple Retail akadaro panguva yekuzivisa kwekuvhurwa kweApple Chitoro online muIndia:
Isu tinodada kuwedzera muIndia uye tinoda kuita zvese zvatinogona kutsigira vatengi vedu nenzvimbo dzavanogara. Tinoziva kuti vashandisi vedu vanovimba netekinoroji kuti varambe vakabatana, vachidzidza, uye vachigadzira kugona kwavo, uye nekuunza iyo Apple Store online kuIndia, tiri kupa vatengi vedu zvakanakisa zveApple panguva ino yakakosha.
Simba rekutenga muIndia harina kukwirira, Kuita kuti zvive nyore kuti zvigadzirwa zvaro zvitengese zvakanaka, Apple inosanganisira dzakasiyana siyana sarudzo dzemari pakuvhurwa mukuwedzera kuchirongwa chekutsinhana nenhaka.
Apple zvigadzirwa, kunyanya iyo iPhone, ndechimwe chezvinhu zvinodiwa zvakanyanya, asi nekuda kwemutengo wavo wakakwira, ivo havana mukana wekubuda wakambotarisirwa nekambani payakatanga kuitengesa munyika kuburikidza nevakagovana nemvumo.
Parizvino Apple haisati iine kuvapo panyama muchimiro chechitoro chayo munyika kunyangwe yanga ichishanda munyika kweanopfuura makore makumi maviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Musi waSeptember 23, Apple inovhura yepamhepo Apple Chitoro muIndia
iOS uye iPadOS 14 inotambura nedhijitari iyo inogadzirisazve default maapps mushure mekutanga zvekare
Wese watchOS 7 Maface Ekutarisa muvhidhiyo imwe